Jiilka labaad ee AirPods Pro wuxuu imaan doonaa Abriil | Waxaan ka socdaa mac
Jiilka labaad ee AirPods Pro oo imanaya Abriil
Sanad cusub iyo warar badan waa inay yimaadaan. Maaha qalab cusub, laakiin waa cusbooneysiin kuwa hadda jira. Waxaan kuu sheegnay waxa Apple awoodo jooga sanadkan 2021 waxaana ka mid ahaa jiilka labaad ee AirPods Pro. Sida laga soo xigtay xanta cusub, kuwani waxay imaan karaan Abriil.
Waxaa jiray xan badan oo oranaya qalabka tufaaxa qaarkood ayaa imaan doona bisha Maarso. Warbixintan cusubi waxay tilmaamaysaa taas Jiilka labaad ee AirPods Pro imaan lahaa Abriil. Taariikhu aniga si weyn iguma habboona. Haddii aan sidan ku sii socono waxaan heli karnaa aalado cusub oo Apple ah bil kasta oo sanadka ka mid ah taasna sidaan horeyba u ognahay waa wax aan macquul ahayn.
Warbixinnada cusub tuuray Mac Otakara wuxuu sheegayaa in Apple ay soo saari doonto jiilkan labaad bisha Abriil ee sanadkan. Waxay lahaan lahaayeen a naqshad cusub oo loogu talagalay kiiska lacag-bixinta waxayna beddeli lahayd cabirkeeda oo gaareysa illaa 46 mm dhererkeeduna soo gaabiyey 54 mm ballaaran
Waxaa naloo sheegay iibiyaasha Shiinaha in AirPods Pro (2nd gen), oo la sii deyn doono Abriil 2021 isla waqtigaasna ah iPhone SE (3rd gen), wuxuu yeelan doonaa naqshad cusub oo ku saabsan kiiska lacag bixinta. Ka sii socon doono 21mm qaro weyn, laakiin waxay noqon doontaa sare 46mm iyo ballac 54mm.
Xanta ugu dambeysay waxay muujisay in AirPods jiilkan cusub, waxay ku imaan kartaa laba cabbir. Midkood ayaa tixraaci kara moodel Lite ah, taasi waa, iyada oo aan la joojin dhawaaqa. Laakiin wararka xanta ah ee xilligan la joogo, ma lahan wax isdaba joog ah waxaana laga yaabaa inaan ka hadlayno jiilkii saddexaad ee AirPods halkii aan ka ahaan lahayn nooc labaad oo nooca Pro ah
Waxa umuuqda inay suurta gal tahay waa taas walxaha dhaadheer ayaa gebi ahaanba la tirtiraa sameecadaha dhagaha ee ka tagaya kaliya qeybta dhegta la gelinayo.
Waa inaan sugnaa, maxaa yeelay sida had iyo jeer ku dhacda wararka xanta ah, waqtigu waa waxa inoo sheegaya haddii la fuliyo iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Jiilka labaad ee AirPods Pro oo imanaya Abriil
Dell wuxuu soo bandhigayaa kormeere 40-inji ah oo leh isku xirnaanta Thunderbolt 3 ee loogu talagalay Mac
Warbixin cusub oo ku saabsan Hyundai iyo Apple Car: 2024 waxay noqon doontaa sanadka wax soo saarka